Manchester United iyo Chelsea oo ku kala bixi doona wareegga 5-aad ee FA Cup-ka | WAJAALE NEWS
January 29, 2019 - Written by Reporter:
Kooxda Chelsea ee difaacaneysa koobka FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska ayaa marti galin doonta kooxda Manchester United oo hore koobkan ugu guuleysatay 12 jeer.
Inkastoo ay Chelsea kulankaas ku hanatay koobka, waxa ay hadda u muuqataa sidii in ay ciyaartaas ku celis tahay, maadaama ay labada kooxood midkood go’aan ka gaadhi karto in kooxda ka soo horjeedda aysan gaadhin ilaa Fiinaalka.
Taasi micnaheeda waa in ciyaarta dhex mari doonta Chelsea iyo Manchester United ay tahay mid kama dambeys ah isla markaana aysan dhaceynin in labadan kooxood ay sidii sannadkii hore fiinaalka u wada gaadhaan.
Naadiga Doncaster Rovers oo ka tirsan horyaalka League One-ka ayaa rajeyneysa iney ka soo baxdo kooxda Crystal Palace oo ay isku soo beegmeen.
Kulamada wareegga 5-aad ayaa dhici doona inta u dhaxeysa 15-ka ilaa 18-ka bisha February.